UGarik Martirosyan kunye nosapho lwakhe
Kutheni kwiprogram ethi "iComedy Club" amahlaya malunga neentsapho azizange zenzeke? Garik Martirosyan. Hayi, ba. Kodwa kunqabile. Akunjalo ngenxa yokuba awufuni ukuhleka usulu ngalo, akunjalo nje. Kukho ezinye izinto ezininzi, ezingenangqiqo. Kodwa ukuba unyanzela, sinokuzalisa le galeko. Kwaye siya kuba nenkqubo yonke. Umzekelo, ngoJuni 1, Usuku lwaBantwana. Kwaye makhe sithethe ngentsapho ... NgoJanuwari, iminyaka eyi-10 iya kuvela, njengoko sidibana noJeanne. Wafika kumthendeleko we-KVN waseStvropol ukuxhasa iqela leyunivesithi, kwaye ndabuyela eYerevan kunye ne "New Armenians". Ngethuba linye lamacandelo esiye senziwa kwitafile enye. Ubusuku bonke bexoxa, kodwa abazange batshintshe iifowuni. Emva koko uJeanne waya ngokukhawuleza ukuba athathe iimviwo. Intlanganiso entsha yenzeke kamva, kwikhosi elandelayo yeKVN, kwakhona eSochi. Kwaye emva koko, asizange sisahlukane.
Ngo-2000 sanquma ukutshata. Sasineemitshato emibini: enye eYerevan yentsapho kunye neentsapho, kwaye yesibini eCyprus - ulutsha. E-Cyprus, yonke into yenzeke ngokukhawuleza: sahamba apho kunye neekonsathi, kwaye sasininzi ixesha. Umtshato wawunomdla kakhulu, ohluke ngokupheleleyo kwabanye. Khawucinge nje: NgoSeptemba, iCyprus ine-35 degrees of heat, iqela le "New Armenian" ngokusemandleni onke. Iitafile zazimi kufuphi namachibi amakhulu, amamitha amathathu ukusuka kuthi sahluma iLwandle iMeditera. Zonke iindwendwe zazibhukuda ngokuhlwa. Kwaye ndandichitha. Kodwa uJeanne wahlala ethembekile kwaye kwada kwasa kusasa e-5 emkhondweni.
UJasmine kwintsapho yakho yakudala kamva.
Ewe, sele siphupha malunga nomntwana, kodwa sifuna ukuyiqala, kuphela xa siba nezimali ezikhuselekileyo. Ekugqibeleni safumana indlu yethu. Kwaye-ke intombazana encinane. Ngendlela, uJasmine wazalwa ngo-Agasti 20, kubonakaliswa nguLeo. UJeanne wayefuna ukuba umntwana abe "iNtumbana". Uyakuthanda lo mqondiso, unina - naye uLeo. Asizange sicwangcise nantoni na.
Ukhumbule iimvakalelo zentlanganiso yokuqala kunye nosana?
Ndambona iyure nesiqingatha emva kokuzalwa kwakhe. Andizange ndiyiqonde nto. Andizange ndibone ukuba ubomi bethu buguqukile. Ndacinga ngemeko kaZhanna ngaphezulu. Ndikhumbula indlela intombi yethu eyathathwa ngayo kuthi: yayincinane kakhulu. Kakhulu kakhulu. Ngaphantsi kweekhilogram ezintathu. Andizange ndikulindele ukuba kube mncinci. Yaye xa uJasmine esibona, ngesizathu esithile waqala ukukhala.
Ekuqaleni kwakukho abanye abancedisi?
Umncedisi wokuqala wayengumama, owayevela eJerevan ngokukhethekileyo ngenxa yomzukulwana wakhe. Emva koko unina kaZhanna wasuka eSochi. Emva koko, umongikazi wabonakala. Kuba wonke umntu wayephelile. Iingqungquthela zobusuku obungenazo ubusuku esizihlangene kunye nazo: Ndingumncinci uJeanne-kakhulu. Unyaka wokuqala ngokubanzi wawunzima. UJasmine ngumntwana ongenasiphelo, kwaye xa kuthelekiswa noko kwakukuqala, ngoku konke kulungile kakhulu. Ubomi bakho buye buntshintsha kakhulu ukusuka ekuzalweni komntwana? Ngaphambili, uJeanne wahamba kunye nami kuzo zonke iindwendwe. Ngoku akakwazi ukwenza oku. Ewe, kwaye mna kufuneka ndiyeke uhambo olude. Ngenxa yokuba akunakwenzeka. Kwaye ngoku iityelele, zithi, njengaye, "umlingiswa wendawo", ezimbini okanye kathathu ngenyanga.
Ngaba ukwesaba ukushiya bodwa?
Oku, kwindawo yokuqala. Okwesibini, ukhathele konke oku kuhambayo, iindiza, iihotele ezithile. Kukho indlu, kunye nenqaku. Mhlawumbi ndiya kuzibutha amandla kwaye ... thabathe intombi yam kwindwendwe.
Uvuma kakhulu. Zonke izinto zakhe ezithandayo ziyimculo. Kukho i-piano encinci enkulu kunye nomkrofoni, kwaye uyacula kule microphone. Akukho mntu, ngombono wam, akazange amfundise oku. Uyazi ngentliziyo yonke ingoma ye-"Fabrika" band. Wathenga i-CD-wayifunde. George Michael wenza. NoPaul McCartney. Ewe, ngokungqongqo! Andiyazi ukuba unentetho, kodwa uvakalelwa ngesigqi. Ufunda kwakhona imibongo, ichaza imibala, ihlula amanani. Ugcoba ezininzi-ezininzi kunye neentlanzi, izibonda kunye neempawu. Ngoku uJasmine uyazi ezinye iileta kwaye angabhala manani. Akunjalo bonke:
"Bonke abantwana bahlakulela ngendlela yabo, yintoni umehluko - ngaba umntwana uya kufunda iileta kwiminyaka emibini okanye emithathu?"
Kuphela abo bathanda - omnye, abane, no. UYasmine wathetha nini? Ukunyaniseka, sele singakhumbuli. Kodwa ngokuqinisekileyo wayengekho. Wayemangalisa gqitha! Ngelinye ilanga watsho amagama amaninzi ngokukhawuleza: unina, uyise, kunye namagama onke amathoyizi akhe ayithandayo. Ukucula nokuthetha, ngendlela, waqala phantse ngokufanayo. Emva koko, unyaka kunye nesiqingatha kamva, wadlala ngentliziyo imibongo esiyifunayo kuye. Andizange ndikholelwe ukuba umntwana omncinci unokukhumbula kakhulu!
Ngendlela, ngokutsha ndamfundisa enye imbongo. Kodwa emva kokuyeka ukuphinda, uJasmine wamkhohlwa. Ngenxa yokuba lide kwaye linzima.
Yintoni le mbongo? EArmenia. Ndiyakholwa ukuba uJasmine kufanele azi ulwimi lwaseArmenia. Uya kufunda isiRashiya ngaphezu kweArmenian. Kubalulekile ukuba aqonde, athethe kwaye abhale e-Armenia.
Ngaba iya kufika ngokufanelekileyo kuye, andiyazi. Kodwa ndicinga ukuba uya kufundisa abantwana bakhe.
Iqhayiya lokuba ngumntwana onetalente?
Hayi, luvuyo olungakumbi. Bonke abantwana bahlakulela ngendlela yabo. Uphi umehluko-ngaba umntwana uya kufunda iileta kwiminyaka emibini okanye emithathu?
Ewe, ngumxobho omkhulu. Ulwa, ubetha abantwana abancinci. Xa eqala ukubetha umntu enkundleni, sasicinga ukuba kwenzeke ngengozi. Sasimgxeka kakhulu, sichaza - ayinakwenziwa. Kwaye sasizimisele ukuba sinokuqonda. Kodwa oku akuzange kuphele apho. Waqala ukukhwabanisa: ukunyamezela kwethu - kuza kumntwana kwaye uqala ukumxabisa, amamkele. Kwaye ngokukhawuleza xa siphenduka, siya kubhokotha ... Sineentloni kakhulu: omnye umntwana akabi kakhulu kwiintlungu ezibangelwa intlungu iqala ukukhala. Sithemba ukuba uJasmine uza kudlulela kungekudala. Kwaye ekhaya, udinga iliso kunye nelihlo. Kungekudala, uJasmine waqala ukubukela iibhotole. Kodwa inxalenye enkulu ayiboni kakhulu kwisikrini njengoko exoxisa into ayibona nje - uyayidika, ixela ngokuzonwabisa. Ulwandle lwengqondo. Bafuna ukumthabatha kwi-midlalo ye-puppet-abazange baqaphele, baqhekeza umdlalo!
Ukuba ushiya iiveki ezimbini kunye noJasmine - uqobo nje, unokwenza?
Hayi, kunjalo. Andikwazi ukuthembeka kumntwana ngeeyure ezintathu. Kodwa ndihlala ndimlalisa. Ndimbeke i-CD yeGeorge Michael Ladies kunye neGentlemen. Ukhetho alukho ngengozi - xa sibeka uFrank Sinatra, akazange alele phantsi kwalo. Sazama abadlali abaninzi. Kukho enye inketho - uPeter Ilyich Tchaikovsky, "Waltz of Flowers".
Uceba njani ukugubha uNyaka omtsha?
Asazi okwamanje, bekungekho ixesha lokucinga.
Kwaye wahlangana njani noMnyaka omtsha wokugqibela?
Andiyi khumbula. Ngoko kuhamba kakuhle. Ngokuqhelekileyo siqala ukugubha ekhaya. Kwaye kunye nomfazi sam siya endaweni ethile. Uyabona, andikhumbuli nokuba kuphi. Ngoko, kwakungumNyaka omtsha wokwenene.
Masibe ngoNyaka omtsha kwilizwe lethu abaninzi abantwana baya kuzalwa. Yaye ukuba ngamnye umfazi unokuba nabantwana abaninzi njengoko ufuna. Akukho nto inokumisela umfazi kule nqwenelo. Kuba xa umntwana ezalwa, ihlabathi lijika. Ukuba ngumama, umfazi uba nomusa, ulungele, unobulumko. Kodwa into eyona nto kukuba eceleni komfazi ngamnye kwakukho indoda yakhe ethandekayo eya kukhusela uxolo noxolo lwentsapho yakhe.
Iinkwenkwezi zokubonisa ishishini ngaphandle kokwenza
ICameron Diaz - I-Movie entsha
I-Vampire yamandla: Indlela yokuyiqonda nokuyikhusela
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-35
I-recipe yeSommes (Samos)
Dessert evela kubisi obisiweyo
Ungayandisa njani ukukhula kwakho
Isaladi kunye neembotyi kunye nama-croutons
Iimpawu ezili-10 ukuba umyeni wakho ongeyena umlingani wakho